Maraykanka oo isaga baxaya UNESCO, xubinnimada Falastiin darteed – Kasmo Newspaper
Maraykanka oo isaga baxaya UNESCO, xubinnimada Falastiin darteed
Updated - October 13, 2017 6:01 am GMT
London (Kasmo), Maamulka Madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii ku dhawaaqay in uu isaga baxayo Ururka UNESCO ee Qarammada Midoobay u qaabilsan horumarinta Dhaqanka iyo Waxbarashada.
Maraykanka ayaa Ururkaas ku eedeeyay in uu qaatay mowqif lid ku ah Israel, ka dib markii bishii July Unesco u aqoonsatay Hebron, oo ku taalla Daanta Galbeed, dhaxal caalami ah oo Falastiin leedahay.
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Washington ayaa lagu sheegay in “Go’aankaas aan si sahlan loo gaarin, saansaanta lidka Israel ka sokowna Ururku u baahanyahay isbeddel qoto dheer”.
Laakiin Maraykanku wuxuu caddeeyay in uu la sii shaqayn doono Ururka una gudbin doono wixii waaya-aragnimo ah isaga oo an xubin rasmi ah ka ahayn ee goob-jooge ahaan ku sii fadhin doona xafiiskiisa ku yaalla Xarunta Ururka ee Paris.
UNESCO ayaa dhankeeda, war qoraal ah oo la soo marsiiyay Agaasiamah Guud, Irina Bokova, lagu xusay sida looga xunyahay go’aanka Maraykanka oo lagu tilmaamay “khasaare soo gaaray dhaqan-bulsheedka kala duwan (Multiculturalism) iyo qoyskii Qarammada Midoobay”.
Maraykanku wuxuu UNESCO ku soo biiray sannadkii 2003dii, wuxuuse tillaabadii u horreysay uga fogaaday Ururka sannadkii 2011kii, isaga oo joojiyay qaaraankii uu siin jiray, xubinnimada Falastiin darteed. Waxaa ka ratibmay in sababtaas darteed Maraykanku, sannadkii 2013kii, lumiyay xaqii codeynta ee Ururka gudihiisa uu ku lahaa.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) waa Hay’ad horumarineed oo Caalami ah oo waajibaadkeedu ka mid yihiin wacyigalinta dumarka, dagaalka jahliga, biyaha nadiifta ah iwm.